Ny Fomba Mety Hamotehan’ny Dihy Vody Ny Fandraharahàna Madinika Rosiana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 07 Mey 2015 11:18 GMT
Miverina indray ireo tantara ratsin'ny tanora nanao fitafin'ny tantely tao Orenburg, saingy amin'ity indray mitoraka ity dia manome lamosina ry zareo mampandihy vody ho anà menaka organika fanosotra hiadiana amin'ny cellulite. Ilay vokatra avy amin'ny hoditra (mety antsoina tsara amin'ny hoe “Twerk!”) dia novokarin'ny orinasa madinika Dash_Dash, mpanao vokatra ho an'ny fikarakarana tarehy —na izay niantsoana azy taloha kelin'ny androany, rehefa nantsoin'ny Rosiana iray mpanao politika ny mpanadihady federaly mba hanokatra ny raharaha fanenjehana ilay orinasa mpamokatra menaka fanosotra, tamin'ny filazàna fa manao “fihetsika fitondrantena ratsy” manohintohina ireo ankizy latsaky ny 16 taona ny dokambarotr'ilay vokatra (azo saziana hatramin'ny telo taona an-tranomazina).
Ilay ranamana nitondra ny “Twerk!” ho eo anatrehan'ny polisy dia tsy iza fa Vitaly Milonov, ilay tompon-kevitra sy lehiben'ny fandrafetana ny fandraràna ny “fampielezan-kevitry ny pelaka” ao Rosia. Milonov, mafana fo fatratra amin'ny fitazonana ny soatoavina nentin-drazana, dia mpanolotsaina ao an-tanànan'i St. Petersburg sady mpikambana ao anatin'ny Rosia Miray, ilay antoko politika eo amin'ny fitondrana ao Rosia.
i Yelena Popova, isan'ny tompon'ilay fivarotana Click-boutique ety anaty aterineto, toerana namarotana ilay menaka dia nilaza tamin'ny gazety Izvestia fa tsy misy andraikitry ny orinasany ny safidin'ireo mpamorona tamin'ny famonosana sy ny fanomezana endrika azy io . Nambaran'i Popova ihany koa fa ireo fonosana izay manasongadina ankizivavy manao fitafin-drenitantely mampandihy vody dia sary natao tànana fa tsy saripika, handisoana ireo fitarainana hafa hoe mety nanitsakitsaka ny lalàna momba ny zon'ny mpamorona ny fametahana marika Dash_Dash na tsy nanaja ny fiainana manokan'ny olona.
Milaza i Milonov fa tiany ho hadihadiana amin'ny maha-mpiray tsikombakomba azy ny Click-boutique, na izany aza. “Tsy maintsy mahafantatra ianareo,” hoy izy nanazava, “fa ny fivarotana zava-mahadomelina dia tsy hoe fotsiny heloka bevava rehefa mujahadeen Afghan mamboly azy ireny eny akaikin'ny toby famaharan'ny tafika Amerikana sasantsasany ianao. Mila manome valiny ihany koa ireo olona mivarotra azy.”
Ora maro taorian'ny niresahana tamin'ny Izvestia, nesorin'ny Click-boutique daholo ny vokatra vokarin'ny Dash_Dash, nodioviny tanteraka tsy ho ao amin'ny tranonkalany.
Tsy novalian'i Dasha Danyushevskaya, mpamorona sady filohan'ny Dash_Dash, ny fangatahana fanehoankevitra nataon'ny RuNet Echo, fa tany anaty lahatsoratra iray tao amin'ny media sôsialy izy no niresaka ilay olana, ora maro talohan'ny nipoahan'ny tantara teny anaty fampahalalam-baovao, tamin'ny fangatahany ireo namany mba tsy hiresaka ity raharaha ity na amin'iza na amin'iza. “Izao no Izvestia, ireo fatim-boalavo tsy mampino ireo,” hoy izy nanoratra.
Efa voafafa ny kaonty Facebook an'ny Dash_Dash, ary navadika ho pejy manokan'ny tena ny pejiny ao amin'ny VKontakte amin'izao fotoana izao.
Lahatsary niely be nahitàna ireo mpampandihy vody tao amin'ny Orenburg (ankavia) sy ny marika menaka “Twerk!” (ankavanana).
Mbola voatahirin'ny ‘cache’ ao amin'ny Google anefa ny fampahafantarana ilay menaka “Twerk!” , ahitàna ny sarin'ny marika ahafantarana azy. Avy amin'io sary io, mazava be fa manasongadina ampahany nalaina tamin'ilay lahatsarin'ireo ankizivavy nampandihy vody tao Orenburg ary niparitaka be tao amin'ny Youtube ilay marika fampahafantarana. Toy ny nafangaron'i Popova ny fakàna ampahany ho fanaingoana noho ny “resolution” sy “pixel” ambany be.
Ahian'i Milonov ho endriky ny olana asehon'ny varotra an-tserasera (e-commerce) erantany ny famonosana tahaka izany. “Miaraka amin'ny fanampian'ny tranonkala,” hoy izy, “azontsika ankehitriny atao ny mivarotra mora foana ireo vokatra hosoka, hala tàhaka, ary vokatra mampidi-doza. Afaka mivarotra menaka fanosotra hiadiana amin'ny “cellulite” ry zareo, izay mety hampitsonika ny tongotrao ary hanongotra ny hoditrao.”
Fony izy io mbola namidy, nisanda 900 robla (200 dolara Amerikana teo ho eo) ny kapoaka iray tamin'ny menaka “Twerk!”. Nanome toky ny Dash_Dash fa hampamandina ny hoditra sy hanarina ny ara-panahy izy io,” toy ny mihomehy maneso ny firotsahana an-tsehatr'ireo Rosiana mpifikitra amin'ny nentin-drazana miaro ny fahasambarana metafizikan'ny firenena.
Indrisy anefa ho an'ilay orinasa mpanao vokatra ho an'ny fikarakarana tarehy, io no karazany iray amin'ny “fahitsiana” tsy vitan'i Vitaly Milonov zakaina.